Vola Marevaka Avo Loko Matevina China Manufacturers & Suppliers & Factory
Vola Marevaka Avo Loko Matevina - mpamokatra, orinasa, mpamatsy avy any Shina
(Total 24 vokatra ho an'ny Vola Marevaka Avo Loko Matevina)
Fiarovam-bidy mahery famokarana vokatra vita amin'ny vokatra Product Description Fanodinana Microsphère Glass 1. Mifantina karazana fitaratra amin'ny endriny, ny habe sy ny habeny mifanaraka amin'ny gripa, ny fihenam-bidy sy ny famafazana ireo fitaovana famonoana. 2. Hanadio kiraro fitaratra sy...
Silan-pandrefesana mikrôpiana misy loko amin'ny alina
Didy roa vita tamin'ny rongony Ireo kofehy ireo dia rakotra fanafody silane sy silikana, mandritra ny famokarana kofehy vita amin'ny vera, izay hanatsara ny toetry ny porofom-panala sy ny fanesorana ny labozia. Etsy ankilany, ny vanim-potoan'ny vanona fitaratra dia mety maharitra, ary izany dia manatsara...
Porofo matevina vita amin'ny ravin-taratasy vita amin'ny labozia
Didy roa vita tamin'ny rongony Akanjo fitaratra fitaratra amin'ny karazana loko manokana mandritra ny famokarana mba hampitombo ny fatran-jiro amin'ny labozia. Ny hafanana dia tsy hifikitra eo amin'ny tendron'ity karazana glasy ity mora amin'ny toe-javatra misy ny andro rain'ny orana sy /...
High Index Feo-kiraro matevina
Ity Fehezam-boninkazo vita amin'ny hoditra ity dia ny fenitra Eoropeana. Kitapo miloko fanoratana lalana (EN1423 / EN1424) Type Size Range Beads Retained(%) EN1424 355-1180um 1180um 0-2 1000um 0-10 850um 5-20
High Quality Fiarovan-jiro matevina
MOMBAMOMBA NY VOKATRA Fanoroana ny lalana sy ny tsipika Manisy loko marevaka vita amin'ny ravin-kofehy ny vatosoa, ary vita amin'ny gorodona vita amin'ny gorodona vita amin'ny gorodona, toy ny Road sy Line Marking Paint Water, Based on Solvent and Thermoplastic. MAMPIANATRA ANTSIKA Kitapo misy vatokely...
Fehezam-boninkazo vita amin'ny hoditra matevina ho an'ny loko lalana mirindra
Fiarovan-trano tsy mitongilana matevina
Porofom-pihetsika mahery vaika. Ny famantaranandron'ny felam-baravarana dia mety mahomby raha tsy misy pentina. Na izany aza, amin'ny toerana vitsy dia vitsy dia sarotra ny mampihatra ireo kavina satria miondrika ao anaty fantsom-baton-koditra na tanko amin'ny milina matevina. Mba hifehezana io olana io,...
Vola Marevaka Avo Loko Matevina Vola marevaka avo loko matevina Pikantsary marevaka matevina Sandam-bary marevaka matevina Bibilao marevaka marevaka Kilalao marevaka avo lenta Fiarovam-bovoka matevina Porofom-bozaka matevina